सन्तोष सरोबरको जोर गजल | पल्लव साहित्यिक ई-पत्रिका
यो देशको प्रधानमन्त्री बन्छ भनेर !!
अरे बाउले छोरा पढायो थोरै समय !!
यस्तो सोच्ने रहेछन मेरो लागी पनि !!
मेरो माया मन मा पलायो थोरै समय !!
कोदो यसरी फल्दै फल्दैन धान बाट !!
मैले सिकेको हु पुरानो उखान बाट !!
तिमी आकाश बाट तारा निकाल्छौ रे !!
माटो निकाल्न सक्छौ र चट्टान बाट !!
बा आमाको सपना पुरा गर्न गएको !!
लास बनेर फर्कियो छोरो मुग्लान बाट !!
तिमि पो यसरी तर्किएर हिड्छौ यार !!
दुनियाँ फिदा हुन्छ मेरो मुस्कान बाट !!
अरे तिमीले मलाइ अपनाउदा सम्म !!
लास उठेर हिड्न सक्छ चिहान बाट !!
हालः खाडी बाट
This entry was posted in गजल and tagged Pallawa, santosh, Sarobar, Sarowar, पल्लव, सन्तोष सरोबरको जोर गजल. Bookmark the permalink.
← अम्बिका कार्की अमुका जोर गजल